နာမည်ကျော် celebrityများ၏ သားသမီများနှင့် သူတို့၏ သူမတူသော အသွင်အပြင်များ - ONE DAILY MEDIA
အလှအပဆိုတာက ပြရုပ်တစ်ခုပါ။ တစ်စုံတယောက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတွေနဲ့ မလှပနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ နာမည်ကျော်ဆယ်လီတွေကလည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ မည်သူကမျှ ပြည့်စုံနေတယ်လို့မျိုးမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာအ‌ေကာင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ တချို့ကလေးတွေက သူတို့မိဘတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေနိုင်ပြီး တချို့ကတော့ လုံးဝကိုကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ ကျန်တော်တို့ One Dailyပေ့ခ်ျကနေ နာမည်ကျော်ဆယ်လီတွေက သူတို့ရဲ့မျိုးဆက် သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက် အသွင်အပြင်လွှမ်းမိုးနိုင်လဲဆိုတာ
ယခုအခါမှာတော့ ကျန်တော်တို့ One Dailyပေ့ခ်ျကနေ နာမည်ကျော်ဆယ်လီတွေက သူတို့ရဲ့မျိုးဆက် သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက် အသွင်အပြင်လွှမ်းမိုးနိုင်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်
(၁) Tilda Swinton နှင့် Honor Swinton Byrne
(၂) Mick Jagger နှင့် Georgia May Jagger
(၃) Sylvester Stallone နှင့် Sistine Stallone
(၄) Vanessa Paradis နှင့် Lily-Rose Depp
(၅) Danny Trejo နှင့် Gilbert Trejo
(၆) David Bowie နှင့် Alexandria Zahra Jones
(၇) Meryl Streep နှင့် Mamie Gummer
(၈) John C. Reilly နှင့် Leo Reilly
(၉) Steve Buscemi နှင့် Michael Buscemi
(၁၀) Danny DeVito နှင့် Lucy DeVito
(၁၁) Barbra Streisand နှင့် Jason Gould
BEVERLY HILLS, CA – NOVEMBER 23: Singer/actor Jason Gould attends Stop Cancer’s Annual Gala Honoring Lori And Michael Milken at The Beverly Hilton Hotel on November 23, 2014 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images)
(၁၂) Björk နှင့် Ísadóra Bjarkardóttir Barney
A post shared by (ísa)dó(r)a bjarkardóttir (@d0lgur)
(၁၃) Grace Jones နှင့် Paulo Goude
Paulo Goude. (Photo by Serge BENHAMOU/Gamma-Rapho via Getty Images)
(၁၄) Uma Thurman နှင့် Maya Hawke
(၁၅) Rod Stewart နှင့် Kimberly Stewart
(၁၆) Steven Tyler နှင့် Mia Tyler
(၁၇) Forest Whitaker နှင့် True Whitake
(၁၈) Vincent Cassel နှင့် Deva Cassel
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲက ဘယ်ကလေးတွေကတော့ သူတို့နဲ့ အတူဆုံးလဲလို့ သင်ထင်ပါသလဲ။ သင့်ကလေးကရော သင်နဲ့တူတာလား ဒါမှမဟုတ် သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့တူတာလားဆိုတာ ဖော်ပြသွားပါဦးနော်။ နောင်လည်း အနုပညာသတင်းများနှင့် ယခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ပေ့ချ်လေးကို Like & Followပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
ကလေးရှိခြင်းက မိသားစုပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် (၅) ချက်